Ndị ọrụ njegharị nke Tanzania na-agba gọọmentị ume: Nabata ndị na-ebu akwụkwọ ikike ngafe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ndị ọrụ njegharị nke Tanzania na-agba gọọmentị ume: Nabata ndị na-ebu akwụkwọ ikike ngafe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọrụ njem Tanzania na-agba mgba
Associationtù Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Njegharị na Tanzania (TATO) na-agbasi mbọ ike ime ka gọọmentị kwenye ịkwụsị mmachi ọhụrụ COVID-19 iji chekwaa oke ọchịchọ ya na ndị nnọchi anya njem Israel iji weta ọtụtụ puku ndị njem njem dị elu.
Tanzania ebuliwo elu ma mekwawanye usoro mgbochi mgbochi ọkachasị ndị metụtara njem mba ụwa.
Ndị ọrụ njem njem Israel na-atụ anya iweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ezumike 2,000 na August na Septemba 2021.
Ndị ọrụ na-eme njem na Tanzania na-arịọ gọọmentị ka ha bulie mmachi maka ndị ji akwụkwọ ikike ngafe na-acha akwụkwọ ndụ n'ihi mgbamume ndị njem nleta a.
Ndị isi ndị njem Israel, bụ ndị na-eme atụmatụ ịkpọbata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị njem njem njem 2,000 dị oke elu na njem ugwu safari nke ugwu Tanzania na ọnwa 2 site na August 2021, edegarala akwụkwọ ozi na TATO na-achọ ka gọọmentị kwalite ụfọdụ mmachi maka ndị njem nleta ha bụ akwụkwọ ikike ngafe. ndị na-ejide ihe mgbakwasị ụkwụ na-agba ọgwụ mgbochi ndị njem ha, yabụ na ọ dịghị mkpa ịmanye ha usoro ndị ọzọ.
Dabere na ọnọdụ ọrịa zuru ụwa ọnụ na ntoputa nke ụdị dị iche iche nke nje virus na-akpata COVID-19, Tanzania emeela ka mgbochi mgbochi dị elu karịa nke kachasị nke ndị metụtara njem mba ụwa.
Na mmelite na Advisory Travel No 6 nke May 3 na mbipụta nke 7, nke sitere na Mee 4, 2021, gọọmentị nyere iwu ka ndị njem niile, ma ndị ala ọzọ ma ọ bụ ndị na-alọghachite, na-abanye na Tanzania ga-eme ka nyocha dị mma maka COVID- Ọrịa 19 gụnyere ule ọsọ ọsọ.
Onye isi ụlọ ọrụ TATO, Maazị Sirili Akko kwuru na mkpakọrịta ya na gọọmentị na-enwe mkparịta ụka dị elu n'okwu a iji nweta azịza nke ọ na-eche na ọ ga-emepekwa ụzọ maka ndị ọzọ na-ebu akwụkwọ ikike ngafe si n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ịbịa mba ahụ.
“Gnimara nke azụmahịa ndị njem N'ịbụ onye ọrịa ahụ gbaruru, atụmanya bụ na onye ọ bụla na-eweta azụmahịa a ga-anabata ya na kapeeti na-acha uhie uhie, ọ nweghịkwa ihe kpatara ndị ọrụ njem njem Israel ga-eji chee echiche maka ebe ndị ọzọ,
Ndị ọrụ ahụ, ndị na-atụ anya na ha ga-eweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ezumike 2,000 na August na Septemba 2021, chọrọ ka ndị njem nlegharị anya si Israel nwee ike ịnweta ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, na ebe nkiri, na-enweghị n'okpuru ule, Maazị Akko kọwara.
Oriakụ Tali Yativ, onye isi oche nke ụlọ ọrụ njem njem kachasị elu na Israel, njem mmụọ pụrụ iche, kwuru na ya na-eme atụmatụ ụgbọ elu ụgbọ elu Tel Aviv 2 - Kilimanjaro International Airport na ndị njem njem 56 dị elu na August na Septemba 2021, mana ọ bụrụ naanị na gọọmentị ga-amata akwụkwọ ikike ngafe ha.
Oriakụ Yativ degaara "Anyị na-eme atụmatụ ụgbọ elu abụọ na Ọgọstụ na Septemba 2 maka naanị maka njem ugwu safari nke ugwu Tanzania na ndị ahịa anyị ga-anọ ụbọchị asatọ na mba ahụ, mana anyị na-echegbu onwe anyị gbasara ihe gbasara ọrịa COVID-2021 mpaghara," onye isi TATO.
Ọ gwara TATO ka ya na gọọmentị nwee mmekọrịta ka ndị Israel na-eme njem nlegharị anya zuru oke na paspọtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ịbanye na ịpụ na-enweghị ule.
Nye Terry Kessel, Onye isi nchịkwa maka Diesenhaus Travel Israel, onye na-eweta ndị njem nleta na mba ahụ maka afọ 20, ọ chọkwara ka TATO mechaa mkparịta ụka ahụ na gọọmentị iji nye ha ohere iweta ọtụtụ ndị njem si Jerusalem.
“Mgbalị anyị mere iweta ndị njem nlegharị anya na Tanzania enweela nkụda mmụọ n’oge na-adịbeghị anya, maka iwu nyocha ọhụrụ nke Tanzania COVID-19. Ndị ahịa anyị na-atụle ịkagbu atụmatụ njem ha n'ihi usoro metụtara, "Maazị Kessel degaara TATO akwụkwọ.
Maazị Kessel kwuru na, “N’enweghị iwelata ihe achọrọ na COVID-19 obodo a, nnukwu ọrụ iji weta ọtụtụ ndị njem nlegharị n’Izrel ga-akụ afọ n’ala.
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ si na Tanzania Tourist Board (TTB) na-egosi na ndị njem si Israel bụ nanị 3,000 na 2011. Ọnụ ọgụgụ ahụ ruru 4,635 na 2012 na ihe karịrị okpukpu atọ karịa ndị ọbịa 15,000 site na 2016.
N'ime afọ ole na ole, Israel agbaala n'ọnọdụ nke isii nke ndị isi ahịa ndị njem nleta na Tanzania tupu ntiwapụ nke ọrịa zuru ụwa ọnụ COVID-19.
United States bụ isi ndị isi nke ihe dị ka nde mmadụ 1.5 na-eme njem nleta na-abịa mba ahụ kwa afọ United Kingdom, Germany, Italy, and India na-esote.
TATO, n’okpuru nkwado nke Mmemme Mmepe nke Mba Ndị Dị n’Otu (UNDP), na-emejuputa atumatu ya ugbu a “Atụmatụ Iweghachite njem nleta” iji nyere aka kwalite azụmahịa, weghachite ọtụtụ puku ọrụ furu efu, ma mepụta ego maka akụ na ụba.
Na-anọchite anya ndị ọrụ njegharị 300, TATO bụ onye na-elekọta ndị ọrụ njem njem na Tanzania na-akpata ihe ruru ijeri $ 2.05 kwa afọ maka akụ na ụba, nke ruru 17 pasent nke GDP nke mba ahụ.